Maxay Maamulka Real Madarid Ka Fikirayeen Markii Ay Go'aamiyeen Bixitaankii Cristaino Ronaldo? Fabio Capello Ayaa Si Maskax Fiican Leh U Sharaxay. - Gool24.Net
Maxay Maamulka Real Madarid Ka Fikirayeen Markii Ay Go’aamiyeen Bixitaankii Cristaino Ronaldo? Fabio Capello Ayaa Si Maskax Fiican Leh U Sharaxay.
Maamulka kooxda Real Madrid ayaa intii aanu xili ciyaareedkani bilaamin waxay aqbaleen dalab 105 milyan euros ahaa oo ay ka heleen kooxda Juventus waxaana si lama filaan ah Santiago Bernabeu uga baxay xidigii taariikhda Real Madrid ugu gool dhalinta fiicnaa ee Cristiano Ronaldo.
Sababo badan ayaa lagu sheegay bixitaankii Cristiano Ronaldo waxayna inta badan ahaayeen kuwo gaar u ahaa Cristiano Ronaldo waxaana ugu waynaa in maamulka kooxdiisa uu ka waayay kalsoonidii iyo ixtiraamkii uu ka doonayay iyo waliba in mushaarkiisa la gaadhsiiyo Neymar Jr iyo Lionel Messi.
Haddaba tababarihii hore ee kooxda Real Madrid isla markaana kooxo badan soo maamulay ee Fabio Capello ayaa soo bandhigay wixii ay maamulka Real Madrid ka fikirayeen markii ay go’aanka ku gaadheen in ay iibiyaan Ronaldo.
Fabio Capello ayaa sheegay in maamulka Real Madrid ay ka fikirayeen in kooxdoodu ay la’aanta Ronaldo si fiican u shaqayn karto oo ay heli karto natiijooyin fiican balse waxa uu ku dooday in joogtiaankii Ronaldo ee Madrid uu kooxaha kale cabsi ku ahaa isla markaana uu xidigaha Madrid dhiiro galin u ahaa taas oo hadda ka luntay.
Fabio Capello oo ka hadlaya wixii ay maamulka Madrid ka fikirayeen markii ay qaateen go’aanka bixitaankii Ronaldo ayaa yidhi: “Waxaa laga yabaa in ay Real Madrid ka sii liidato, waxay ka fikirayeen in ay si ka sahlan u guulaysan kareen la’aanta Cristiano Ronaldo oo ay natiijooyinku la mid noqon kareen”.
Fabio Capello oo sharaxaya sababta kala duwanaanshaha Real Madrid ee la’aanta Ronaldo iyo markii uu kooxda joogay ayaa yidhi: “Markii uu isagu Madrid joogay, kooxuhu waxay haaayeen kuwo cabsanaya, ciyaartoyda ay isku kooxda ahaayeen waxay ahaayeen kuwo in badan xor ah”.
Tan iyo markii uu Cristiano Ronaldo ka baxay Real Madrid waxay u muuqatay mid gabi ahaanba ka duwan kooxdii ay soo ahayd xili ciyaareedyadii la soo dhaafay iyada oo taasi keentay in Julen Lopetegui shaqada looga caydhiyay dhawr bilood gudahood.
Laakiin waxay Real Madrid sidoo kale qalad ku lahayd in markii ay go’aansatay bixitaankii Ronaldo in ayna markiiba suuqa u galin badalkiisa taas oo keentay in xaaladii Bernabeu ay gabi ahaanba noqotay mid khilaafsan sidii ay ahayd dhawrkii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.